Crosby Mini yakabva yanyatsobatana Ratchet Type Takudzai Binders Turnbuc ...
G450 HDG US Type Drop yakabva yanyatsobatana Wire Rope okusungisa
M16 C15 zingi kuifukidza CR3 DIN582 vakagadzira paakasimudza Eye Nuts
Hot Dip kwakakurudzira G403 rushaya End Swivel
Kwakakurudzira Screw Pin Bow nezvisungo G209
Chiwanikwa Steel Red Painted Drop yakabva yanyatsobatana Eye chitakuriso Liftin ...
Stainless Steel Long D nezvisungo Long Type
1. Description of Stainless Steel Long D nezvisungo Long Type
Material: Stainless Steel, SS304 kana SS316
Dzakakodzera kushandiswa vachisimudza
2. Product Specification of Stainless Steel Long D nezvisungo Long Type
Item: Stainless Steel Long D nezvisungo Long Type
Size:kubva 4mm kuti 12mm
Apex PP bhegi + atorwa + nhovo, kana maererano vatengi '
Mutoro chiteshi: Qingdao chiteshi kana zvimwe zviteshi mu China
Shipping: nengarava kana nendege
1. Uri fekitari kana kutengesa kambani?
Takatanga sechinhu fekitari chinotsigisa cheni makore anenge 20 apfuura uye yakatanga zvishoma nezvishoma kuva guru mugadziri Marine zvokushandisa.
Panguva iyoyowo, kunosangana kukura zvinodiwa kubva yedu vatengi vari itsva mabhizimisi munzvimbo, isu rakawedzerwa kukura kwedu naVaMnangagwa Hardware uye fasteners, uye dzimwe kufanana Hardware nokuzvisarudzira kukwira hwakasimba tikabatana nevamwe mafekitari.
Zvino tiri kudada kutaura kuti RUI DE TAI akaita semunhu ane pamusoro nokutengesa pangetani & Rigging Hardware kuchamhembe China.
2. kupi fekitari yako iri?
fekitari Our riri Jimo, Qingdao City, Shandong Province, China.
Uri nokugashirwa kushanyira isu chero nguva yokuti pamwe yemberi.
3. zvigadzirwa iwe kupa?
Sezvataurwa pamusoro apa, kupa mhando dzose zvomumvura zvokushandisa, neketani, Rigging Hardware, fasteners, uye kufanana Hardware.
4. Ko sei iwe kudzora unhu?
By akamumutsira yepamusoro kudzora pfungwa uye achiongorora nechimwe kugadzirwa muitiro pamwe yakasimba nezvinodiwa, ari chakaremara zvigadzirwa ichabviswa pamberi kavha uye pakusununguka.
Nokuti mudiwa mafekitari, tinoshandisa misoro hurongwa uhwu mitemo kuti vaongorore kurimwa mutsetse. Uyewo yedu nyanzvi QC chikwata kuchaita kushandisa onsite Check uye kupedza chigadzirwa cheki pamberi pakukurukura.
5. Nei imi akavimbika kupfuura vamwe mafekitari?
We inofambiswa mibvunzo yenyu pakarepo 24 maawa pazuva, mazuva 7 vhiki ose.
Tinogona kupa kupfuura yemakwikwi mutengo inobva chete yepamusoro pamwero kubudikidza rikurumidze utariri dzose kwacho.
Ingoti zvaunoda, uye tichataura edza rimwe vanorega mhinduro kuti bhizimisi rako kuponesa
nguva yako nesimba.
6. sei I kubhadhara?
Tinobvuma 30% muripo pachine & 70% pamberi ainge atumirwa pamusoro pamwe wokutanga, zvichida T / T kana L / C.
7. sei I kugamuchira zvinhu?
Tiine nyanzvi chokufambisa nevasori, isu vanokwanisa makurukuriro zvigadzirwa kune vakawanda zvengarava munyika yose. Door nesuo basa iri rinotsigirwa. FOB, C & F, CIF vari anowanzodanwa kushandiswa dzaishandiswa mazwi.
Welcome kutenga uye Wholesale inopisa kutengesa yedu Stainless simbi refu D namaketani refu mhando. Tiri ndeimwe nyanzvi uye vaitungamirira naVaMnangagwa zvigadzirwa vagadziri uye bhizimisi. Ndapota akasununguka kuti vakasununguka muenzaniso kwatiri uye runhare fekitari yedu yakawanda info.
Previous: 55T 2 1 / 2US Type bhaudhi Type Chain nezvisungo G2150
SS316 Stainless Steel US Type Screw Pin D Shack ...
HDG US Type G291 Kugara Nut Eye Zvipfigiso
20mm CM European Type zingi kuifukidza Large Dee naBhaasha ...
Stainless Steel D Ring pamwe Clip
Hot Dip kwakakurudzira DIN1478 Turnbuckles
Ratchet Type Mutoro Binders Turnbuckles pamwe Eye
Chii kushandiswa waya netambo clip?
Stainless simbi Thimbles kubatanidza
Chii mutengo Stainless simbi Thim ...
The naVaMnangagwa nengetani ari kushandiswa Pr ...
Kupatsanura pakati nokusimudza zvokukochekera